လူတွေ… လူတွေ… လူတွေ… | မိုးစက်မှော်
လူတွေ… လူတွေ… လူတွေ…
Filed under: ရှင်းတမ်း/ကြော်ငြာ, အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး — Leaveacomment
လူတွေအကြောင်း တရားကျစရာလေးတွေကို ပြောပြချင်လို့ပါ၊ ဟဲ ဟဲ…၊ လူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်နော်၊ တော်ကြာ… ကျွန်တော့်ကို နတ်သား အောက်မေ့ပြီး ထုတ်ထားလိုက်မှာ စိုးလို့၊ ဘာတဲ့… လူတွေ… လူတွေ… လူတွေ…။
လူ့စိတ်က မျောက်နဲ့တူသတဲ့၊ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့… တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ဟိုရောက် ဒီရောက်။ လောဘကလည်း ကြီးလိုက်သေး… ၀ါးနေတာက တတုံး၊ ပန်းကန်ထဲမှာ တတုံး၊ ခပ်နေတာ တတုံးလို့ ဆိုရမယ်။ ဒါတောင် စားပြီးရင် သုံးလေးတုံးလောက် ထုပ်(ထည့်)သွားဦးမှ ဆိုတာမျိုးက တွေးတတ်သေးတယ်။
ဥပမာဗျာ… ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲက အမကြီးတယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျမိတယ် ဆိုပါစို့၊ ဟေ့… ချာတိတ် အခုနေတဲ့ နေရာမှာ နေရထိုင်ရတာ အဆင်ပြေလားလို့ သူက မေးလာတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်က ဘာပြန်ဖြေမယ် ထင်သလဲ။
“ဟုတ်ကဲ့၊ မမ… အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နားမှာ ကုလား စားသောက်ဆိုင်တွေ များတယ်လေ၊ ကျွန်တော်က ကုလားစာ ကြိုက်တော့ အိုကေ နေတာပေါ့၊ အာလူးကြော်နဲ့ ကြက်ကြော် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လည်း ရှိတော့ စားရေးသောက်ရေးလည်း မပူရဘူးလေ၊ ကျွန်တော်က ချက်မှ မစားတာ“
“အခန်းကရော အိုကေလား၊ မြန်မာတွေနဲ့လား“
“မြန်မာတွေနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ နိုင်ငံစုံကပဲ… ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်ပါပဲ၊ ကျွန်တော်သာ ကြာကြာနေနေတာ၊ အိမ်သူကြီး (တအိမ်လုံးကို တာဝန်ခံ ယူထားပြီး အခန်းတခန်းချင်း ပြန်ငှားစားသူ) တရုတ်မကလည်း မဆိုးပါဘူး။ တော်တော်လေး အသန့်ကြိုက်တယ်။ သူ့နားရက်ဆို အိမ်ပဲ ရှင်းနေတာပဲ… ကျွန်တော် ရောက်စကဆို ကျွန်တော့်အခန်းပါ လာပြီး ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ လာစုပ်နေလို့ နေနေ ကျွန်တော့်ဘာသာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး တားထားရတယ်“
“အခန်းကတော့ ကျဉ်းတယ်ဗျာ၊ ၆ ပေ၊ ၁၀ ပေ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကုတင်တလုံး စားပွဲတလုံးပဲ။ တပတ် ၇၅ ပေါင်“
“ဇုန် သုံး ဗျ“
“အင်း… နည်းနည်းတော့ များတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခန်းလေးက မဆိုးပါဘူး၊ အပေါ်ထပ်ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက် မျက်နှာစာက လမ်းမကို မြင်ရတယ်လေ၊ နောက်ပြီး ခေါင်းရင်းက တံခါးမကြီးက ဆွဲဖွင့်လို့ ရတယ်။ နှစ်ရွက်တံခါးဗျ… နွေရာသီမှာ နေရသက်သာတာပေါ့“
ကျွန်တော်တို့ အပြန်အလှန် ပြောဖြစ်ကျတာကို ရေးပြလိုက်တာပါ။ ဟုတ်တယ်၊ အခန်းခက တက္ကစီဆရာက စလာပို့ ကတည်းက အခန်းကို တချက်ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်လဲ၊ ၆၅ ပေါင်လားတဲ့။ ကျွန်တော်က ၇၅ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့ များတယ်ဗျတဲ့ ပြောဖူးတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ကျွန်တော်ကလည်း အရေးပေါ် အခန်းရှာ ပြောင်းခဲ့ရတော့ မဆိုးဘူးဆိုပြီး ယူမိလိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျတယ်၊ ကျွန်တော်ကြိုက်ရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်လား။
ဆက်ရရင် ခုန မမနဲ့ နောက် သုံးလေးလလောက်ကျတော့ တခါ စကားပြောဖြစ်ပြန်တယ်။ ဟိုပြောဒီပြော ပြောနေရင်း မတ်တပ်ကနေ နေရေးထိုင်ရေး စားရေးသောက်ရေးဘက် ရောက်သွားပြန်တာပေါ့။ မမတွေက မောင်လေးအရွယ်ဆိုရင် ကလေးလေးလို သဘောထားတယ် မဟုတ်လား၊ တယောက်ထဲ နေရတဲ့ မောင်လေးကို သနားလို့နဲ့ တူပါတယ်၊ ခုနကလို အလားတူ စကားတွေ ပြန်မေးပြန်ပါတယ်။
“…. …. ….“
“တပတ် ၇၅ ပေါင်“
“ဟင်… ဟုတ်… ဟုတ်… ဟုတ်…“
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အဲဒါပါပဲ။ လူတွေ မဟုတ်လားဗျာ၊ စိတ်ပြောင်းသွားတာကိုး…။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့။ သူနဲ့ ပထမတခါ ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ ပြောဆိုထားခဲ့တော့ ကျွန်တော်က မှတ်မိနေတယ်လေ။ မမကြီးက မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူပဲ မတန်ဘူးပြောလိုက်၊ တန်တယ်ပြောလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်မှာသာ…။
မမအကြောင်း ပြောပြီးတော့ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဆက်ပြောမှ ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အရင်က သိသိ၊ ခုမှ သိသိ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တယ်လေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတတ်အောင် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် တဖက်တလမ်းက ကူညီပေးနေတာပါလို့ ပြောရင်တော့ နည်းနည်း ဖောင်းရာကျမယ်၊ ဆရာကြီး လုပ်ရာကျမယ်။ တကယ်တော့ ရည်ရွယ်ရင်းက အဲဒါပါပဲ။
အသက် ၂၀ ကို တော်တော် ကျော်သွားတဲ့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးတွေထဲက တချို့က ကြောက်ကြတယ်ဗျ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း တောအကြောင်း တောင်အကြောင်းကိုတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောရဲကြဘူး၊ နိုင်ငံရေးတွေ မပါပါနဲ့တို့၊ ဦးလေးက နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာလားလို့ ဘာတို့ ပြန်ပြန်မေးလာတတ်တယ်။ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ဒီအကြောင်းအရာက ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြောလို့ဆိုလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ မပြောချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ မပြောချင်တာပါ ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့လို့ ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်ပြောမိပါတယ်။
တချို့ကတော့ တခုခုများ ပြောမိရင် ဒုက္ခရောက်မှာ… အဖမ်းခံရမှာကို စိတ်ပူပုံ ရပါတယ်။ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ဆွေမျိုးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပဲ အဲဒီလို ပြောထား ခြောက်ထားသလားတော့ မသိပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် တယောက်ယောက်ကများ ပြောထားသလို ဖြစ်နေသလားတော့ မသိပါ၊ သူတို့ စိတ်ထဲ အဲဒီလို စွဲနေပါတယ်။ တကယ်တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို သုံးသပ်ခွင့်က လူတိုင်းမှာ မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ အခွှင့်အရေးပါ။ ဘာကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရှိတာကို ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ တဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်း တခုခုကမှ လာပြီး ကန့်သတ် ပိတ်ပင် တားမြစ် အရေးယူလို့ မရပါဘူး။
ဒါကိုပဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေပေါ့၊ တချို့များ ပြောလွန်လွန်းလို့ ကျွန်တော်ကတောင် သတိ ပြန်ပေးရပါသေးတယ်။ ခက်နေတာက တချို့က မလိုအပ်ဘဲ ကြောက်နေကြတာပါ။ ကျွန်တော်က အဲဒီလို ရှင်းပြ ပြောပြတော့ တချို့လည်း လက်ခံပါတယ်၊ တချို့လည်း ရှင်းပြလိုက်ကာမှ ဒီလူကြီး ငါ့ပါ စည်းရုံးနေပြီဆိုပြီး ကြောက်သွားကြလို့ စကားကို လာမပြောတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဘက်တွေရဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြီးတော့ ကျွန်တော့် စကားပြောပုံကို ဆက်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်က အထက်က ဆိုခဲ့သလို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောလိုက်တော့ ရင်းနှီးပြီးသား သိပြီးသား လူတွေကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့၊ သူတို့က ကျွန်တော့် ရင်ထဲကို မြင်နေကြတာကိုး။ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့သူကျတော့ ဘယ့်နှယ့်ပါလိမ့်၊ မသိသား နားမလည် ဆိုးဝါးလှပါလား ဆိုပြီး လက်လန် သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း စတတ်နောက်တတ်တော့ အခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုး လုပ်တတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တခါတလေ စကားကို ချိုချိုသာသာ ပြောတတ်ပေမယ့် တခါတလေ ဘုတော တတ်ပါတယ်။ စကားပြော လေ့ကျင့်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီစကား… ဒီစကားတွေပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောတတ်တဲ့ သူတွေထဲမှာတော့ ကျွန်တော် မပါချင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင်တော့ တခုခု ထူးဆန်းသွားရမယ်၊ တခုခု အငြင်းအခုံ ဖြစ်ရမယ်၊ တခုခုတော့ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်သွားရမယ်… အဲဒါမျိုးကိုမှ ကျွန်တော်က ပြောချင်တာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်၊ ငါကလည်း သူများကိုသာ လျှောက်ဝေဖန်နေတယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုးပါလားလို့…။
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စကားပြောနိုင်တာ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စကားပြောတတ်တာ၊ စကားကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ပြောတတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါမျိုးတွေက ဟန်ဆောင်ပြီး ပြောနေလို့ မရပါဘူး။ လူ့စိတ်ဆိုတာက ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို ခုန်နေ၊ ပြောင်းနေတော့ သာတောင်မှ မလွယ်ပါသေးတယ်။
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလာပေမယ့် နည်းနည်းလေးလည်း ဆွလိုက်ရော ဆဲတော့တာပါပဲ၊ တခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိလှချည်လားလို့ အောက်မေ့မိပေမယ့် နောက်တခါ ပြောတော့ နောက်တမျိုး ဖြစ်နေတာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ တချို့များကျတော့လည်း စကားတွေသာ အများကြီး ပြောနေတာ ဘာပြောလို့ ဘာပြောနေမှန်း မသိတဲ့ သူတွေလည်း မြင်ရပြန်ပါတယ်။
သူများသာ ပြောမိပါတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း တခါတခါ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆရာသမားတွေက ဆုံးမကြပါတယ်။ မင်း ဘာကို ဆိုလိုမှန်း ငါ မသိဘူးတဲ့၊ ဆရာသမား တယောက်က ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလို ပြောဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ငါ ဆရာ့ကို အတော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောလိုက်နိုင်တာပဲလို့ အောက်မေ့တဲ့ အချိန်မှာ ဆရာက အဲဒီလို မှတ်ချက်ပြုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားပြောတာမှာ စနောက်ပြောရတာကလည်း ဒီဂရီတွေ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက အချိန်တိုင်း အဆင်ပြေနေ ပျော်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အများစုက ရုန်းဟယ် ကန်ဟယ်နဲ့ လုံးပန်းနေရတာပါ။ တခါ ဘ၀နောက်ခံ အကြောင်းတွေကလည်း တယောက်နဲ့တယောက် မတူကြပါဘူး။ လူတိုင်းကို ကိုယ့်လိုချည်းထင်ပြီး စကားတွေ စွတ်ပြောလို့လည်း မရပါဘူး။
စနောက်ပြောတာမှာ ဒီဂရီရှိတယ်ဆိုတာက ဒီစကား ဒီနောက်ပြောင် ပြောဆိုမှုကိုပဲ အချိန်တခုမှာ သူရောကိုယ်ပါ ရယ်နိုင်ပေမယ့် တခြားအချိန်တခုမှာတော့ သူ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က မရယ်နိုင်တဲ့အပြင် ဒေါသဖြစ်တာမျိုးတောင် ရှိလာနိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်မကြည်မလင် ဖြစ်သွားတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဟ… ဘယ်နှယ့် ဖြစ်တာလဲ၊ ဒါလေးကိုများ စိတ်ဆိုးစရာလားလို့ သွားပြောလို့ မရပါဘူး။
လူတွေက စိတ်ဆင်းရဲနေချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်က ပုံမှန် အနေအထား မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ပိုပြီး စိတ်ကျလွယ်၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်၊ ဒေါသထွက်လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ ကိုယ်က တခုခု ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောလိုက်ပေမယ့် တဖက်လူက အများကြီး ခံစားသွားရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှလည်း မမေ့တော့ဘဲ မှတ်ထားတတ် ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ မခေါ်နိုင် မပြောနိုင် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝမ်းကွဲသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ မဖြစ်မနေ လျှော့လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကလွဲလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ အယူအဆကို မလျှော့ပေးပါဘူး။ တုန့်ပြန်မှုကလည်း မြန်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်ကလည်း လူတွေထဲက လူပဲလေ… ကျွန်တော်လည်း စိတ်ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ အကြာကြီး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုတောင် ပြောင်းပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ငါတော့ သတိထားမှ တော်မယ်၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ များတာ မကောင်းဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျွန်တော် ဆုံးမပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လူပါးလေး လုပ်လိုက်မယ်၊ ပဲလေးနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လိမ်လိမ်မာမာ ရိုရိုသေသေ ပြောဆို ဆက်ဆံမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ စကားကိုလည်း အနည်းဆုံး ပြောမယ်၊ လိုမှသာ ပြောမယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးမလို့ လိုက်နာကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းလေ… လူတွေထဲက လူတယောက်မို့…။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်။